Warshad Foorsada istaag | Shiinaha Istaage Pouches Pouches Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaal
Boorsooyinka Gusseted ee Hoose
Boorsooyinka la qasaaray
Boorsooyinka la seexdo
Boorsooyinka Side Gusseted
Baakadaha Saddex Dhinac
Foorsooyinka hoose ee Flat
Boorsooyinka gusset-ka ee hoose waa inta ugu badan ee la isticmaalo boorsooyinka taagan. Gabdhaha gunta hoose waxaa laga helaa salka hoose ee boorsooyinka rogrogmi kara. Waxay u sii kala qaybsan yihiin hoosta jeexjeexa, K-shaabad, iyo gussets hoose oo wareegsan. K-Seal Gunta iyo Plow Bottom gusset boorsooyinka waxaa laga bedelay boorsooyinka gusset wareega hoose si loo helo awood dheeri ah.
Boorsooyinka hoose ee fidsan ayaa ah kuwa loogu jecel yahay warshadaha baakadaha cunnada, oo aad u sii badanaya. Waxay leeyihiin magacyo badan, sida kiishka hoose ee hoose, kiishka sanaadiiqda, kiishka lebenka, boorsooyinka hoose ee laba jibbaaran, iwm. Waxay yihiin 5-dhinac, kor u qaadaya rafcaanka shelf oo leh shan shaashadood oo ah aagga dusha sare ee daabacan si ay u muujiyaan wax soo saarkaaga ama astaantaada si wax ku ool ah. Ka sokow, boorsooyinka sanduuqyadu way ka deggan yihiin khaanadaha waana sahlan tahay in la isku dhejiyo iyada oo la siinayo raaxo labadaba dukaamada iyo macaamiisha, taas oo kor u qaadi doonta tartanka suuqa, waxayna ku habboon tahay dhismaha calaamadaha wax soo saarka iyo sumcadda sumcadda.
Si fudud loo furo loona fududaado in la xiro, siibiyaasha cadaadiska-u-riixa waa ikhtiyaar aad u fiican, kharash-ku-ool ah oo dib-loogu-celin karo / dib-u-habayn loogu talagalay noocyo badan oo boorsooyin jilicsan, oo ay ku jiraan labadaba boorsooyinka taagan iyo boorsooyinka jiifka-fidsan, oo waxtar u leh ka-hortagga faddaraynta ama daadashada iyo sidii loo ilaalin lahaa waxyaabaha soo-saarka cusub.
Boorsooyinka la isku qasay ayaa ah xulasho baakad dabacsan oo caan ah oo warshado badan leh, gaar ahaan waxyaabaha dareeraha & dareeraha-dareeraha ah. Naqshadeynta boorsooyinkaan isdabajoogga ah ayaa ah mid saaxiibtinimo leh oo aad loogu dabaqi karo marka la barbar dhigo xulashooyinka kale oo leh muuqaalka sahlanaanta bixinta. Waxyaalaha kiishka la kala siisanyahay ee aan bixinno waxay adeegsadaan wax soosaar heer sare ah iyo tikniyoolajiyadda daabacaadda waxaanna si ammaan ah u keydin karnaa ugana qaadi karnaa alaabada dareeraha ah iyo kuwa qalalan labadaba qashin la'aan. Cabirka iyo foomka waa loo habeyn karaa hadba sida ay macaamiishu ugu baahan yihiin uguna baahan yihiin.
Boorsooyinka qaabaysan waxay u muuqdaan inay yihiin xulashooyin shelf oo wanaagsan oo rafcaanka sumadda leh. Iyagu waa kuwo aad u fudud oo adeegsada. Iyadoo la adeegsanayo farsamada wax soosaarka iyo daabacaadda heerka-sare ah, boorsooyinkeena qaabeysan ayaa loo qaabeyn karaa qaab kastoo ay u baakadeyso alaabtaada ugu wanaagsan midabyo iyo cabirro kala duwan.
Linyi Guoshengli Baakadaha Waxyaabaha Co., Ltd.
Tel: + 86-539-8597897